जातको कारण समस्या छैन । 'शरद र निशाको लभस्टोरी' । – Namaste Filmy
जातको कारण समस्या छैन । 'शरद र निशाको लभस्टोरी' ।
बिदुर खतिवडा [dropcap]ए[/dropcap]कदिनसँगै लन्च खाने क्रममा चर्चित क्रिकेटर शरद भेसावकर समक्ष नीशा अधिकारीले अचानक प्रेम प्रस्ताव राखिन् । नीशाको प्रस्ताव सुनेपछि शरद झस्के, उनी झस्किनुको कारण थियो, त्यो समय नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकप खेल्न बंगलादेश जाने तरखरमा थियो । बंगलादेश विश्वकपमा कसरी राम्रो खेल्ने भनेर चिन्ता गरिरहेका बेला प्रेमिकाले ‘आधिकारिक प्रस्ताव’ गरेपछि शरदले ‘दबाब’ महसुस गरे । शरदको तत्कालिन मनस्थिति देखेर नीशा फिस्स हाँसिन । एक आम युवती र प्रेमिकाको हिसाबले प्रस्ताव गरे पनि विश्वकप क्रिकेटमा नेपाली टिम र त्यसमा पनि शरदको प्रदर्शन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेकी नीशाले तत्कालै आफ्नो प्रस्ताव सच्याउँदै भनिन्- ‘के गर्ने ? सबैले कुराकाटी रहेका छन्, साथमा हिँड्न पनि समस्या छ, अब हाम्रो सम्बन्धलाई कुन रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ? विश्वकप सकिएपछि प्रेमलाई औपचारिकता दिने निष्कर्ष निकालेर टुंगिएको त्यो वार्ता भएको केही दिनमै अर्थात् विश्वकपमा जानुपूर्व नै शरदले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिँदै नीशाको प्रस्ताव स्वीकार गरे अनि नीशाको प्रेमीका रूपमा उनी विश्वकप खेल्न हिँडे ।
गत आइतबार नीशाले फेसबुकमा शरदसँगको तस्बिरसहितको स्टाटस राख्दै शरद आफ्नो प्रेमको हिस्सा भएको कुरा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। ‘सर्वव्यापी प्रेम र यो मेरो हिस्सा’ शीर्षकमा राखिएको उनको प्रेमको सार्वजनिकीकरणलाई तत्कालै धेरैले बधाई दिए। यो समाचार लेख्दा ३ हजारको लाइक र २ सय ५० भन्दा बढीको कमेन्ट उनको स्टाटसमा देखिन्छ, जसलाई थुप्रैले सेयर पनि गरेका छन्। ‘अब हामी प्रेमि-प्रेमिकाका रूपमा एक साथ अघि बढ्न सबै दृष्टिकोणले तयार भैसकेका छौं’ नीशाले भनिन्- ‘हाम्रो प्रेमपूर्ण रूपमा परिपक्व भैसकेको छ, आगामी जीवनसँगै बिताउने हिसाबले प्रेमलाई सार्वजनिक गर्न उचित मानेका हौं।’
‘सन् २०१२ मा हाम्रो भेट भएको हो’ नीशाले भनिन्- ‘तर अफेयरमा भने पछिल्लो ७ महिनादेखि छौं।’ मिडियामा साथी हुँदैको अवस्थामा प्रेमि-प्रेमिकाको ट्याग लगाइएपछि साँच्चै नै सँगै हिँड्न असहज हुने भएपछि सम्बन्धलाई खुलासा गर्न यो जोडीले आवश्यक मान्यो। आफूहरूबीच प्रेम रहेको स्वीकार गरेपछि अब यो जोडीको विवाह कहिले होला त ? भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘हाम्रो सम्बन्धका लागि विवाह अर्को एउटा औपचारिकता मात्र हो’ नीशाले भनिन्- ‘दुवैलाई सहज हुने समय निर्धारण गरेर विवाह गर्नेछौं।’ क्रिकेटरका रूपमा लोकप्रिय शरद तथा नायिका-मोडलका रूपमा उत्तिकै लोकप्रिय नीशाबीचको यो प्रेम नेपाली सेलिब्रेटीहरूको संसारमा उदाहरणीय मानिएको छ।
क्रिकेट खेलाडीका रूपमा शरद भेसावाकरको नाम सुनेकी थिइन् नीशाले, तर उनीहरूबीच भेट भएको थिएन्। सन् २०१२ को एकसाँझ नीशा साथीभाइका साथमा लाजिम्पाटस्थित एक रेष्टुराँमा थिइन्। त्यही बेला डिभिजन स्तरको खेल जितेको खुसियाली मनाउन शरद केही साथीका साथमा त्यहीँ आइपुगे। नीशाले तत्कालै स्टाटस लेखिन्-
‘कन्ग्राच्युलेसन टिम नेपाल वे टु गो’। ‘आम नेपाली झैं म पनि क्रिकेटले नेपालको शिर उँचो बनाएकोमा खुसी थिएँ’ फुटबल खेल रुचाउने नीशाले भनिन्- ‘त्यही भएर क्रिकेटसम्बन्धी पहिलो स्टाटस लेखें, इन्टरनेसनल एरेनामा नेपाली क्रिकेटको चर्चा चुलिँदै गएपछि मेरो पनि त्यसमा चाख बढ्दै गएको थियो।’ अलि पर रहेका शरद नीशा भएतर्फ लम्किए र हात मिलाउँदै भने-
‘थ्यांक यु सो मच फर सर्पोट अस, किप इन सर्पोटिङ अस।’ शरदले मिलाएको त्यो हात नै आफ्नो जीवन सम्हाल्ने हात हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म नगरेकी नीशा त्यति बेला मुस्कुराइन् मात्र। त्यसपछि फेसबुक फ्रेन्ड भएका उनीहरू क्रमशः साथी बन्दै गए।
‘फेसबुक सर्फ गर्दा अनलाइन देखे कुराकानी हुन्थ्यो’ नीशाले बताइन्।अमेरिकाबाट चलचित्रसम्बन्धी अध्ययन गरेर फर्किएकी नायिकाको अनिश्चित करिअर र नेपालका तर्फबाट थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेले पनि नेपाली नागरिकता पाउन नसकिरहेका खेलाडीबीच सुख-दुःखका कुराकानी हुन थालेका थिए। नीशा भन्छिन्- ‘खेलाडी र कलाकार भन्ने बित्तिकै ममा एक प्रकारको सम्मान भाव आउँथ्यो। नीशाका अनुसार उनी शरद मात्र होइन्, अन्य खेलका खेलाडी तथा पर्वतारोहीहरूप्रति पनि उत्तिकै सद्भाव राख्थिन्।
निरन्तर क्लब फुटबल हेर्ने, परिवारसँगै जमेर विश्वकप फुटबलमा रमाउने आफ्नो विगतको परिवेशबाट शरदसँगको संगतकै कारण क्रिकेटलाई नियाल्न थालेकी नीशा शरदको जीवनशैलीबाट प्रभावित भैसकेकी थिइन्।
‘क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट’ नीशाले भनिन्- ‘शरदसँग क्रिकेट मात्र छ जस्तो लाग्यो, राज्यको कुनै विशिष्ट सुविधा नपाए पनि उसमा दसौं वर्ष मेहनत गरेर समर्पित भावले विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको झन्डा फर्फराउने एक मात्र निर्दिष्ट लक्ष्य थियो।’
नीशाले चलचित्र र मिडिया उद्योगका बारेमा शरदलाई प्रसस्त जानकारी दिइन । त्यसपछि एकदिन चलचित्र ‘धुवाँ यो नशाको’ च्यारिटी सो हेर्न फेसबुक फ्रेन्ड बनेका क्रिकेटरलाई निम्तो दिइन्। उक्त चलचित्र हेरेपछि अझ बढी नजिकिएको अनुभव दुवैले गरे। शरदले पनि आफूलाई लिएर बनाइएको डकुमेन्ट्री नीशालाई देखाए। त्यसपछि नीशा क्रिकेटप्रतिको शरदको ‘प्यासन’ देखेर थप आश्चर्यचकित भइन्। त्यसपछि नै उनी क्रिकेट प्रशंसक बनिन्। नीशाले भनिन्- ‘टेस्ट र वान डेको लामो खेल हेर्न नसक्ने म ती खेलहरू समेत बुझ्न थालिसकेकी थिएँ।’
नीशालाई लाग्न थालेको थियो- ‘शरद सिम्पल छ, डाउन टु अर्थ छ, क्रिकेटप्रति प्यासनेट छ, आफ्नै व्यक्तिगत संघर्षमा छ, नागरिकता नपाएको अवस्था छ, तै पनि नेपालको नाम चम्काउन मेहनत गरिरहेको छ, यसकारण शरद अरू पुरुषमित्रहरूभन्दा फरक छ।’
सन् २०१३ को मेमा नीशा सगरमाथा आरोहण गर्न बेसक्याम्पतर्फ लागिन्। एकले अर्कोलाई माया गर्ने थाहा थियो तर त्यसलाई दुवैले अभिव्यक्त गरेका थिएनन्। सगरमाथा आरोहणमा जानुपूर्व नै बाक्लिएको निकटताका कारण नीशालाई अरू मित्रभन्दा शरद प्रिय लाग्थे, शरदसँग जुनसुकै कुरा पनि सेयर गर्न पाउँदा उनी आनन्दित हुन्थिन्। ‘जिस्कने, रमाइलो गर्ने, हल्काफुल्का फ्लर्ट गर्ने भैसकेको थियो’ नीशा सम्झिन्छिन्- ‘कुनै कुरा सेयर गर्न नपाउँदा खल्लो अनुभव हुने, अरू साथीहरू भए पनि उनीहरूलाई भन्न मन नलाग्ने, शरदले नै मेरो कुरा बुझ्छ भन्ने लाग्न थालिसकेको थियो।’ तर सगरमाथातर्फ जानुपूर्व त्यो प्रेम औपचारिक रूपमा अभिव्यक्त भएन्।
नीशाका अनुसार उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर सगरमाथा आरोहण पूर्व नै केही समाचार नआएका होइनन्। ‘हामी आफैं हाम्रो सम्बन्ध ‘लभ’ हो भन्नेमा ‘स्योर’ थिएनौं’ नीशाले भनिन्- ‘कसरी भन्ने कि हामी प्रेमि-प्रेमिका हौं भनेर, त्यही भएर राम्रो साथी हौं भन्यौं।’ विश्वकप अघिसम्म शरदलाई आमरूपमा सबैले नचिन्ने भएकाले त्यसको केही फाइदा उनीहरूलाई प्राप्त भयो। नेपाली क्रिकेट टिमले विश्वकप खेल्ने चर्चा भएलगत्तै आपसी भेटका निम्ति दुवै ‘कन्सियस’ बन्नुपर्ने भयो। नीशा सगरमाथा आरोहणमा जाने समयमा नेपाली क्रिकेट विश्वकप छनौट चरणका खेलको तयारी गर्दै थियो। त्यसैले शरदले पनि प्रेमलाईभन्दा खेललाई नै बढी महत्व दिए।
सौम्य स्वभावका शरद फरासिली स्वभावकी नीशाको संगतमा थिए। त्यसको फाइदा लिँदै नीशा एकदम अघि बढेर उनलाई जिस्काउँथिन्। शरदको सरलता, नम्रता एवं सादापनले नीशालाई मुग्ध तुल्याएको थियो। आफू सौम्य भए पनि शरद नीशाको नटखट स्वभावमा रमाउँथे। उनीहरू दुवैको एउटै साझा मन्त्र थियो। नीशा भन्छिन्-‘हाम्रो निकटता बढ्ने बटमलाइनचाहिँ नेपाल मै बसेर आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्ने भन्ने थियो।’ अहिले पनि उनीहरू दुवैजना आफूहरूबीचको सम्बन्धभन्दा पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा दत्तचित्त रहेको बताउँछन्।
स्वभावले सौम्य भए पनि शरद नीशाको सौन्दर्यको प्रशंसा गर्न चुक्दैनथे। तस्बिरहरू हेरेर यो राम्रो, त्यो नराम्रो जस्ता प्रतिक्रिया दिइरहन्थे। नीशाको ओठको कोठीको बयान त कति गरे-गरे। यता नीशालाई शरदको डिम्पल अति नै मनपर्छ अनि उछिट्टएिका दाँत पनि उनलाई उत्तिकै आकर्षक लाग्छन्। नीशाले भनिन्- ‘मैले शरदलाई भनेकी छु, खेल्दा त्यो दाँतचाहिँ बचाउ है, त्यो दाँत कसैले छुन पाउँदैन नि।’
पछिल्लो दुई बर्षमा नीशाले चलचित्र, मिडिया र सगरमाथा आरोहणका क्षेत्रमा सफल यात्रा तय गरेकी छिन् भने नेपाली क्रिकेटलाई सर्वोच्च प्रतियोगितासम्म सामेल गराउन शरदले सफलता हासिल गरेका छन्। सगरमाथा आरोहणपछि नीशा विपश्यना ध्यान शिविरमा सहभागी भइन्। विपश्यनाका १० दिन र त्यसभित्र दैनिक ११ घन्टा उनले जन्मिएदेखिको वर्तमानसम्मको जीवनलाई पटक-पटक नियालिन्। विपश्यनाले दिएको फुर्तिकै कारण उनी अझ बढी खुल्ने भएकी थिइन्।
कसरी आयो प्रेम प्रस्ताव
विपश्यनाका क्रममा मानिस धर्तीमा आएपछि मरेर जान्छ भन्ने जीवनको शाश्वत सत्यलाई बोध गरेकै आधारमा नीशाले शरदसँगको निकटतालाई औपचारिकता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय लिइन्।
‘यदि कुनै मानिस मनपर्छ, राम्रो लाग्छ भने किन एप्रोच नगर्ने ? भन्ने कुरा मेरो मनमा आयो’ नीशाले सम्झिइन्- ‘शरदभन्दा अघि मैले नै प्रस्ताव राखे।’ दुवैले दुवैलाई मनपराउने भए पनि अभिव्यक्त नगरेकाले नीशाले अग्रसरता लिएकी थिइन्।
‘विश्वकपमा छनौट भए लगत्तै नेपाल श्रेणीगत मान्यताका निम्ति खेल्न जानुपर्ने थियो, जसमा नेपालले एकदमै खराब प्रदर्शन गरेको थियो।’ नीशाले भनिन्- ‘म आरोहणमा सफल भएपनि हामी दुवै छोटो समयका लागि उतारचढावको जीवनमा थियौं, त्यसैले प्रेमी-प्रेमिकाको औपचारिक यात्राको जिम्मेवारी लिन सकिरहेका थिएनौं।’ पहिलो विश्वकप खेलेर आएपछि औपचारिक प्रेम यात्रा सुरु गर्ने कुरा गरेका शरदले नै विश्वकपमा जानुपूर्व नै नीशालाई प्रेमिकाका रूपमा स्वीकार गरे। ‘नेपाली टिमको खेल हेरेर देश नै पागल भैरहेको समयमा शरदको खेलले ममा ल्याएको तरंग बयान गरिनसक्नु थियो’ नीशाले भनिन्- ‘मुख्य कुरा नेपाली टिमले नेपालको झन्डा फर्फरायो। त्यतिबेला मेरो भावभंगीमा हेर्न लायकको थियो।’ नहोस् पनि किन त्यति बेला शरदले जोडदार प्रदर्शन पनि गरे, नेपाललाई जिताउने निर्णय भूमिका खेल्दै।
के भन्छिन् नीशा ?
विवाह कहिले गर्ने त ?
अब सबैले हामीलाई सोध्ने प्रश्न यही नै हो। प्रेम सार्वजनिक गरेपछि विवाह कहिले गर्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ। हाम्रो प्रेम हामी दुवैको परिवारको जानकारीमा छ। त्यसैले विवाह गर्ने छलफल अब चल्न सक्छ, मानसिक एवं भावनात्मक हिसाबले अहिले नै पनि हामी तयारी अवस्थामा छौं। यद्यपि अझै केही समय लाग्नसक्छ। यसको निर्णय दुवै परिवारको सल्लाहमा हुनेछ। ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो। मेरा लागि अब उ नै हो भन्ने भैसक्यो।
अन्तरजातीय सम्बन्ध भएकाले केही असहज स्थिति त छैन नि ?
मेरो परिवारमा त्यो समस्या छैन्, तिमी खुसी हुने भए जोसँग विवाह गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। पहिले मिडियामा लाग्ने बेला छोरी चलचित्र क्षेत्रमा नजाओस् भन्ने चाहिँ थियो तर पढेलेखेकी करिअर ओरिएन्टेड युवतीले मिडिया वा ग्लामसेक्टरमा अनुशासित भएर राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्न मैले रिस्क लिए। एकपटक विश्वास जितेपछि परिवारले सधैं सहयोग गर्छ। शरदका बुबा महाराष्ट्रियन र आमा खड्का क्षेत्री हुनुहुन्छ। धर्मसंस्कृति फरक हुने हिसाबमा सोचेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने घरको भनाइ हुनसक्थ्यो तर हाम्रो हकमा त्यस्तो समस्या पनि छैन। फेरि मेरो दाइले नै अमेरिकी युवतीसँग विवाह गर्नुभएको छ।
तपाईंहरूबीचको अफेयर कस्तो चलिरहेको छ त ?
हाम्रो चिनजान २ वर्ष अघि भएको हो। पहिलो ६ महिना एकअर्कासँग चिनजान, दोस्रो ६ महिना निकट साथीको सम्बन्ध तेस्रो ६ महिना अनौपचारिक अफेयर अनि चौथो ६ महिना औपचारिक रूपमै अफेयरमा छौं। दुवै सेलिब्रेटी छौं, त्यसकारण कन्सस हुनुपर्छ। एउटा ग्रुप डिनरमा जाँदा सबैले शरदलाई घेरेपछि म अरु साथीसँग गफ गरेर बस्नुपर्‍यो। डेटिङ भनेर एकदिन लन्चका लागि पातलेवन गएका थियौं, जहाँ केही समय साथमा विताएर घर फर्कियौं। सम्झनलायक डेट त्यही नै हो। केही चलचित्र साथमा हेरेका छौं। दुवै व्यस्त भएकाले समय निकाल्न पनि गाह्रो छ। अहिले म काठमाडौंमा हुँदा शरद अमेरिकामा, शरद काठमाडौं हुँदा म मुस्ताङमा, म मुस्ताङबाट फर्किएको ३ दिनमै उ विदेश जाँदैछ, दशैंमा म नेपालमै हुन्छु, त्यतिबेला शरद विदेशमा हुन्छ। दशैंपछि उ र्फकन्छ, त्यसको केही दिनमै म सुटिङका लागि बाहिर जाँदैछु, यस्तै छ तै पनि कामसँगै अफेयरलाई पनि निरन्तरता दिनै पर्छ।
के शरद तपाईंको सपनाको राजकुमार हुन् ?
हो, मैले सेक्युरिटी खोज्ने हो भनें वा परिवारको चाहना बुझ्ने हो भने बाउबाजेकै सम्पत्तिले भरिपूर्ण कुनै सम्पन्न अझ अमेरिकी एनआरएन खोजेर विवाह गर्थे होला तर मेरो सपनाको राजकुमार ‘सेल्फमेड पर्सन’ थियो। अहिले म एकदमै दंग छु, भनेजस्तो साथी पाएर। म आफू पनि सेल्फमेड भएकाले त्यस्तै मानिस खोजे। मैले कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम सुरु गरेयता घरबाट १ रुपैयाँ लिएको छैन, स्कुटर, गाडी आफ्नै बलबुताले जोडे। शरदको करिअरमा पनि त्यस्तै छ, उ सेल्फमेड हो। क्रिकेटमै उसले जीवन बिताएको छ। मलाई थाहा छ, हामी दुवै मिलेर आफ्नो सपनाको संसार सजाउन सक्छौं।
साभार: कान्तिपुर साप्ताहिक ।
सेतो बाघको फष्ट लुक सार्बजनिक
माइकल ज्याक्सनको छोरी १६ बर्षमै गर्भवती ।